Shina: Fisoratana anarana tena izy ho an’ny bilaogy madinika · Global Voices teny Malagasy
Shina: Fisoratana anarana tena izy ho an'ny bilaogy madinika
Voadika ny 25 Febroary 2019 14:30 GMT
Nametraka fitsipika vaovao maromaro ny governemantan'ny tanànan'i Beijing tamin'ny 16 desambra 2011 mba hifehezana ny fivezivezen'ny vaovao ao amin'ny sehatra fibilaogy madinika. Mitaky amin'ireo mpiserasera mba hisoratra anarana amin'ny anaran'izy ireo tena izy ny Fehezandalàna fampandrosoana sy fifehezana ny bilaogy madinika ao an-tanànan'i Beijing [zh] (dikan-teny Anglisy ao amin'ny Bill Bishop) alohan'ny hamoahana hafatra ao amin'ny sehatra fibilaogy madinika raha tsy izany ampidirina ao anatin'ny fepetra mamaky fotsiny izy ireo. Tsy maintsy manamarina ny mombamomba ireo mpiseraserany ao anatin'ny 3 volana ireo mpamatsy tolotra biilaogy madinika.
Akoatra izay, voaràra ho an'ny mpiserasera ny mizara hafatra izay:
1. manitsakitsaka ny fitsipiky ny lalàm-panorenana;
2. Mampidi-doza ny fiarovam-pirenena, mampiseho ny tsiambaratelom-panjakana, mandrisika fikomiana amin'ny fanjakana, manimba ny firaisam-pirenena;
3. Manimba ny voninahitra sy ny tombontsoam-pirenena;
4. Mandrisika fankahalana, fanavakavahana sy ny fampiraisana ara-poko;
5. Manohitra ny politikam-paritry ny firenena, mampiely fombam-pivavahana sy finoanoam-poana;
6. Manely tsaho, manakorontana ny filaminam-bahoaka sy ny fitoniana;
7. Mampiely vaovao vetaveta, torohaim-pilokana, herisetra, horohoro na fampahalalam-baovao izay miteraka hetsika heloka bevava;
8. Fanehoan-kevitra manala-baraka na fampahalalam-baovao manitsakitsaka ny zon'ny hafa;
9. Mamporisika fivoriana tsy ara-dalàna, fihetsiketsehana, hetsika sy fivoriana manakorontana ny filaminam-bahoaka;
10.Hetsika ataon'ny vondron'olom-pirenena tsy ara-dalàna;
11. Votoaty voaràran'ny lalàna sy fitsipika hafa rehetra.
Kaody fanamarinana mari-panondroana
Araka ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny manampahefana ao Beijing, tsy maintsy manamarina ny mombamomba azy any amin'ny tompon'andraikitra voatondron'ny fanjakana ny mpiserasera. Mamoaka kaody fanamarinana ho an'ilay mpiserasera avy eo ilay tompon'andraikitra mba handraketana ny kaontiny bilaogy madinika.
Nadikan'ny China Media Project ny vaovao ao an-toerana sy ny fanehoan-kevitry ny Profesora Zhen Jiang momba ny fitsipika. Nilaza i Zhen fa tsy manana fototra ara-dalàna ilay fitsipika.
Mandritra izany, namoaka vaovao fanadihadiana maromaro ho fanohanana ny rafitra fisoratana anarana tena izy ho an'ny bilaogy madinika ny fampielezan-kevitry ny fanjakana China Central Television. Voafafa tao anatin'ny segondra vitsy tao amin'ny Sina Weibo ireo tsikera manohitra ny fitsipika.